जेठ २, बागलुङ । कोरोना आशंकामा धौलागिरी अस्पताल बागलुङको आईसोलेशन कक्षमा भर्ना भएका एक युवामा स्वास्थ्य समस्या बढेपछि पोखरा रिफर गरिएको छ ।
भारतदेखि फर्केर गल्कोट नगरपालिका–११ रिघाको क्वारेन्टाइनमा बसेका गल्कोट–७ मल्मका २३ वर्षका युवालाई रगतमा समस्या देखिएपछि बिहीवार दिउँसो गण्डकी अस्पताल पोखरा पठाइएको धौलागिरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा शैलेन्द्र वि.क. पोखरेलले बताए । युवा रिघाको क्वारेन्टाइनबाट स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मंगलवार अञ्चल अस्पतालको आईसोलेशनमा भर्ना भएका थिए ।
युवाको भारतबाट नेपाल आउँदा सिमा नाका र रिघाको क्वारेन्टाइनमा रहँदा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । दुवै परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा पोखरेलले बताए । उनको दुई पटक पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि उनलाई उच्च ज्वरो, खोकी, डाइरिया र रक्तकोषमा समस्या देखिएपछि अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो ।
आइसोलेसन उपचाररत उनलाई रगतमा समस्या रहेको र अहिले बढ्दै गएको र शरिरको अन्य अंगहरुमा पनि समस्या बढ्दै गएकोले थप उपचारको लागि पोखरा रिफर गरिएको डा. पोखरेलले बताए । उनको तेस्रो पटक कोरोना परीक्षणको लागि बुधवार स्वाब संकलन गरि पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।